အူမကြီးထဲ၌ လေများစုပုံလာခြင်း (လေအောင့်ခြင်း) | Page 262 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အူမကြီးထဲ၌ လေများစုပုံလာခြင်း (လေအောင့်ခြင်း)
အစာကြေလွယ်သော အစားအသောက်များ (ဥပမာ - အမျှင်ပါသောအစားများ) အချဉ်ဖောက်ခြင်းကြောင့် အူမကြီးအတွင်း၌ လေများစုပုံလာရခြင်းဖြစ်သည်။ အစားအစာအချို့၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော ဂလူတန် (သို့) နို့နှင့် သစ်သီးများမှရသော သကြားဓာတ်တို့ကို ခန္ဓာကိုယ်၏အစာချေစနစ်မှ ကောင်းစွာ မချေဖျက်နိုင်ခြင်းကြောင့်လည်း လေများစုပုံလာစေနိုင်သည်။
အခြားဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာများမှာ -
1. အူမကြီးအတွင်းမှ စားကြွင်းစားကျန်များ
2. ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် အခြားဆေးဝါးများကြောင့် အူအတွင်းရှိ ဘက်တီးရီးယားပိုးများပြောင်းလဲခြင်း
4. မြိုချမိသောလေများ အူမကြီးတွင်စုပုံခြင်း
5. ၀မ်းချုပ်ခြင်းသည် အစာဟောင်းများ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ကြာမြင့်စွာရှိနေခြင်းကြောင့် အချဉ်ဖောက်မှုပိုမိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
တခါတရံတွင်မူ လေထခြင်းသည် အခြားသောအူရောဂါများကြောင့်လည်း လေထခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ - အူသိမ်အူမရောဂါ (Irritable Bowel Syndrome)၊ နို့ထဲပါသည့် သကြားဓာတ်ကို မခံနိုင်ဖြစ်သောရောဂါ(Lactose Intolerance)
အူမကြီးအတွင်း လေများစုံပုံခြင်းကို ကာကွယ်ရန်-
- လေထစေနိုင်သော အစားအသောက်များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ (ဥပမာ - ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ပေါင်မုန့်ဖြူ၊ မှိုအမျိုးမျိုး၊ ဘီယာနှင့် ဂတ်(စ်)ပါသော အချိုရည်များ) အကယ်၍ နို့ထွက်ပစ္စည်းများနှင့်မတည့်ပါက လက်တို့(စ်) (Lactose) ပါဝင်မှုနည်းသော (သို့) မပါဝင်သော နို့မျိုးကိုသာရွေးချယ်ပါ။
- အဆီပါသော အစားအစာများကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြဉ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဆီဓာတ်သည် အစာချေနှုန်းကို နှေးကွေးစေ၍ အချဉ်ဖောက်ခြင်းကို ပိုမိုဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- အမျှင်ဓာတ်များသောအစာများကို စားသုံးခြင်းကို ခေတ္တရပ်နားထားပါ။ အမျှင်များသည် အစာချေဖျက်မှုကို အားကောင်းစေသော်လည်း လေထမှုကိုပိုမိုဖြစ်စေပါသည်။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာမြင့်ပြီးမှ အနည်းငယ်စီပြန်လည် စားသုံးပါ။
- အစာကိုအေးဆေးစွာစားပါ။ အစာစားချိန်ကို အချိန်ယူ၍စားသုံးပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုများနေချိန်၊ ပြေးနေချိန်တွင် အစာစားသုံးပါက အစာချေဖျက်မှုစနစ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
- အစာစားပြီးတိုင်း လမ်းနည်းနည်းလျှောက်ပေးပါ။
- လေငြိမ်ဆေးဟုလူသိများသော simethicone ပါဝင်သည့်ဆေးများကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သောက်သုံးပါ။
ဒါတွေကြောင့် မနက်အိပ်ရာထထချင်း ရေသောက်သင့်တယ်
၂၂.၅.၂၀၁၇ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
မနက်စောစောဘာမှမလုပ်ခင်မှာ ရေကိုအရင်ဆုံးသောက်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့-
1. ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
မနက်နိုးနိုးချင်း ရေသောက်ခြင်းက အစားချေစနစ်ကိုပိုကောင်းစေပြီး ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုမြန်စေပါတယ်။...
ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား (2) ဝေဒနာကို ခံစားနေရပါက ခန္ဓာကိုယ်မှ အစားအစာမှာပါဝင်တဲ့ ကစီဓာတ်တွေကို စွမ်းအင်အဖြစ်မပြောင်းလဲပေးနိုင်တာကြောင့် သွေးထဲမှာ သကြားတွေစုပုံလာပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ နှလုံးရောဂါ၊ မျက်စိကွယ်ခြင်း၊ အာရုံကြောနဲ့ ကိုယ်တွင်းကလ...